ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ဌာနချုပ်အနီး အစိုးရတပ် အင်အားတိုး
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ဌာနချုပ်အနီး အစိုးရတပ် အင်အားတိုး
ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ဌာနချုပ်အနီး အစိုးရတပ် အင်အားတိုး	ကွန်းချမ်း	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၁ မိနစ်	ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် အစိုးရက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များကို ဖိတ်ခေါ်နေစဉ်မှာပင် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ/ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (SSPP/ SSA-N) ဝမ်ဟိုင်း ဌာနချုပ် အနီးတွင် အစိုးရတပ်က အင်အား ထပ်မံ ဖြည့်ဆည်းလာကြောင်း SSA က ပြောသည်။ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ်ကို သိမ်းရန်အတွက် ဌာနချုပ် အရှေ့တောင်ပိုင်း ၃ မိုင်အကွာ၊ အနောက်ဘက် ၅ မိုင်အကွာတွင် တပ်စွဲထားသည့် အစိုးရ တပ်ရင်း ၇ ရင်းအပြင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့အခြေစိုက် တပ်မ ၅၅ လက်အောက်ခံ ခမရ ၅ဝ၇၊ ခမရ ၁၄၃ နှင့် ခမရ ၁၁၄ က အင်အား ၅ဝဝ ခန့် ထပ်မံ ဖြည့်ဆည်း ထားသည်ဟု SSA-N ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးစိုင်းလှက ပြောသည်။ “တဘက်က သူတို့က ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ဝမ်ဟိုင်း ဌာနချုပ်ကို သိမ်းဖို့ တပ်စွဲထားတဲ့ တပ်တွေကိုလည်း မရုပ်ဘူး။ မရုပ်တဲ့အပြင် တပ်တွေ ထပ်ဖြည့်တယ်ဆိုတော့ စစ်ရေးအရ ပြန်ဖြေရှင်းမယ့် သဘော ရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆရတယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးစိုင်းလှက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။အစိုးရက “ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း”ကြေညာချက်ကို သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး “ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးလိုသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများသည် ပဏာမအဆင့် အနေဖြင့် တဖွဲ့ချင်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရန်” ဖေါ်ပြပါရှိသည်။ ကြေညာချက် မထုတ်မီ တရက်အလိုတွင် ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC က ပြည်ထောင်စုတခုလုံး ယာယီ အပစ်အခတ် ရပ်ရေး ကြေညာ ကာ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ စာရေးသား တောင်းဆိုထားခဲ့သည်။ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တွင်လည်း အစိုးရကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်နေသည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အချို့ ရှိနေကြောင်းနှင့်၊ ထိုအဖွဲ့များသည် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို အမြန်ရပ်ဆိုင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ဗဟိုအစိုးရအနေနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရကို ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် အစိုးရအရာရှိများ၊ စီးပွားရေး လူမှုရေး နယ်ပယ်အသီးသီး အသင်းအဖွဲ့ အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သေးသည်။ရှမ်းတပ်များကို ထောက်ပံ့သည် ဆိုပြီး ခမရ ၁၁၄ က အင်္ဂါနေ့ မနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကျေးသီမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၇ မိုင်ကျော်တွင် ရှိသည့် ဝမ်ဖွီးကျေးရွာအုပ်စု ဝမ့်နားပိင်းကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ ၆ လုံးနှင့် SSA-N ၏ ဝမ့်ဖွီးဆည် လုံခြုံရေးစခန်းကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာ ဆက်သွယ်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရေး အသင်း (SWAN ) မှ ပြောခွင့်ရ ယိင်းဟာန်ဖက ပြောသည်။“ရှမ်းသူပုန်တွေကို ထောက်ပံ့ဦးမယ်၊ ထမင်းကျွေးဦးမယ်၊ သတင်းပေးဦးမယ်။ မင်းတို့ ရှမ်းတွေကို အကုန်လုံး သတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး ရွာကို မီးရှို့ရင်း အော်ပြောတယ်” ဟု သူမက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လယ်မြေဧက ၁၀၀၀ ခန့်ကို ရေပေးဝေရန်အတွက် ဝမ့်ဖွီးဆည်ကို ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ပါတီက တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။သြဂုတ်လ ၁၄-၁၅ ရက်နေ့ အစိုးရတပ်နှင့် SSA-N တို့ တိုက်ပွဲများ အပြင်အထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ရွာသားများအား လမ်းပြအဖြစ် ခေါ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ကျေးသီးမြို့နယ် ဝမ့်စေ့ကျေးရွာ အုပ်စုနှင့် ဝမ့်ဖွေးကျေးရွာအုပ်စုမှ ရွာသား ၅၀၀ ကျော် တောတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ပုန်းအောင်း နေရသည်ဟုလည်း သူမက ပြောသည်။အစိုးရတပ်နှင့် SSA-N တို့အကြား ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲအတွင်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၃ သောင်းကျော် ဘေးကင်းရာသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရပြီး လူသားချင်း စာနာသည့် အထောက်အပံ့များ လိုအပ်နေကြောင်း ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာ ဆက်သွယ်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရေး အသင်းနှင့် ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေး မဏ္ဍိုင်တို့က သြဂုတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ပူးပေါင်း ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြပါရှိသည်။
RCSS/SSA နှင့် အစိုးရတပ်များ နေကုန် တိုက်ပွဲဖြစ်၊ ကျဆုံးမှုများ ရှိ	ရှမ်းမြောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရတပ် လှုပ်ရှားမှုရှိ၊ ပလောင်၊ KIA တို့နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်	အစိုးရတပ်မှ သဘောတူညီချက်ကို မလိုက်နာသည့်အတွက် RCSS/SSA နှင့် တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ဟုဆို	အစိုးရ လက်နက်ကြီးဒဏ်ကြောင့် ရွာသား တဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး၊ သုံးဦးဒဏ်ရာရ	KIO ဌာနချုပ် အနီး တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ် စစ်ရဟတ်ယာဉ်များသုံး တိုက်ခိုက်	အစိုးရ မတောင်းပန်မချင်း မန္တလေးသံဃာများ နေ့စဉ် ဆန္ဒပြမည်	လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်မှု တောင်းပန်ရေး ရန်ကုန်သံဃာများ ဆန္ဒပြ	Who is Online
We have 138 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved